Noho ny torohevitra mahasoa ny psikology Mampiaraka an-tserasera ianao dia afaka tsy ho afa-baraka eo amin’ny fifandraisana. Isika dia hanampy anao hijanona loatra ny fanontaniana:»Ahoana no hihaona ny zazavavy.»
Isaky ny tanora te-hanana ny raharaha amin’ny tovovavy tsara tarehy. Saingy matetika ny hay resena vato misakana ny nofy no dingana voalohany ny teny fampidirana. Ny maraina amin’ny andavanandro, raha ny ankizivavy maika ny hijery no tena sarotra — dry zareo io dia tsy miankina aminao. Hihaona bebe kokoa amin’ny toe-javatra ireo rehefa ny tovovavy manana ny fotoana, izy dia maika sy ny afaka kely amin’ny chat.
Amin’ny Mampiaraka toerana mba hitsena ny ankizivavy be mora kokoa, satria samy mahalala fa ianao mazoto fikarohana. Nitari-dalana amin’ny hoe»izay tsy mety tsy mahazo misotro champagne», manomboka ny resaka. Maro ny ankizivavy no vonona ny manomboka ny fifandraisana amin’ny tovolahy iray voalohany, na dia izany aza maro ireo biraom-pifidianana Mampiaraka online manamafy fa ny vehivavy no mbola manantena fa ny dingana voalohany dia ny hahatonga ny lehilahy iray.
Tsara ny manomboka ny famatorana ny Fiarahana miaraka amin’ny ankizivavy ianao tia ny profil ho fanontaniana ny mombamomba azy: ny zava-mahaliana azy, Fialam-boly, ny zavatra andrasana avy amin’ny mpiara-miasa. Manao ny fiderana misy ny andinindininy amin’ny fampiharana ny endrika na sary.
Haneho ny heviny na ny hametraka fanontaniana
Ny zava-dehibe indrindra izay namely ny resaka, dia ny fifandraisana dia handeha mora kokoa.
Dingana roa: matoky
Inona ny hoe ny tovovavy.
Eny, na dia ny momba ny
Ny zava-dehibe indrindra, ny teny toa marina sy matoky. Raha ny ankizivavy no mahafinaritra ho anao, izany dia fotoana mba hahafantarany azy tsara kokoa. Noho izany dia tsy mipetraka indray ary ny tsy manantena an izany tsy nahy mandoa ny saina ho anao, handray andraikitra eo amin’ny tànany. Hijanona matoky sy tony, manontany ny heviny, dia anontanio ny fanontaniana vitsivitsy momba ny tombontsoany afaka avy hatrany ny mahita lohahevitra mahazatra ny resaka.
Ny malaza tompony ny fifanakalozan-kevitra, ny Amerikana mpanao gazety Larry king milaza fa ny tsara indrindra fanontaniana ho an’ny ankamaroan’ny toe-javatra: nahoana. Izy dia tsy midika hoe mba manana ny valiny, araka izay mety hanantona ny hafahafa dia mijanonà kely aloha ary manampy ny mametraka lalina hifandray amin’ny olona iray hafa. Ohatra, nanoratra izy fa tiany ny hetsika hafa an-tanàna, na tsy te ho irery. Aza hadinoina ny mahita ny antony.
Dingana telo: ny tenanao ho
Maro ny toro-hevitra sy ny hevitra momba ny fomba hitsena ny vehivavy. Nisy na dia iray antsoina hoe haka mpanazatra fanatitra atrikasa mikasika ny fifehezana ny Mampiaraka ny ankizivavy. Fa izy rehetra dia manaiky fa ny mora indrindra sy ny fomba tena mahomby indrindra mba handresy ny ankizivavy iray ny saina dia mba ho tso-po.
Minoa ahy, tsy mila manaporofo, na hampiseho aminao ny fomba ianao, raha ny marina, dia tsy fotsiny ny tenanao. Mampiasa ny vazivazy ary aza adino fa ny vehivavy rehetra tsy an-kanavaka tia azy izy ireo, rehefa hanao mampamangy. Na raha toa ianao ka maty henatra, miezaka ny miaiky izany — indrindra ny tovovavy dia mankasitraka ny fahadiovam-po
← Knitting torolalana ho an'ny Junghans-Wolle
Mihaona ny olona ho maimaim-poana - Video Mampiaraka →